Qalabka Android - Telefoonnada, kiniiniyada, smartwatch iyo in ka badan! | Androidsis (Bogga 24)
Google ayaa xaqiijisay in barnaamijka 'Nexus Player', uusan kaliya cusbooneysiin doonin barnaamijka Android P, laakiin sidoo kale uu joojin doono helitaanka wararka ku saabsan amniga.
Galaxy S9 iyo S9 + waxay taageero u lahaan doonaan xaqiiqda soo korortay ee ARCore
Galaxy S9 iyo S9 + waxay taageeri doonaan xaqiiqda soo korortay ee ARCore. Raadi wax badan oo ku saabsan ogeysiiska rasmiga ah ee Google Augmented Reality ayaa imanaya dhamaadka Samsung.
Qeybo ka mid ah Galaxy S9 iyo S9 + waxay muujinayaan dhibaatooyin meelaha qaarkood ee shaashadda
Qeybo ka mid ah Galaxy S9 iyo S9 +, ayaa bixiya dhibaatooyin la xiriira howlaha shaashada, iyagoo bixiya aagag dhintay oo isdhexgalka uusan shaqeyn.
Sharp Aquos S3 Mini: Dhexdhexaadku wuxuu sii wadaa inuu sharad ku yeesho qaan-gaarka
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan Sharp Aquos S3 Mini, taleefanka cusub ee khadka dhexe ee nooc ee horay loogu soo bandhigay Shiinaha. Qeexitaankiisa, qiimaha iyo taariikhda bilaabista ayaa horeyba loo ogaa.
Muuqaal cusub oo xaday ayaa muujinaya aalad aan la aqoon oo ka socota ZTE Ma noqon kartaa ZTE-ga xiga Nubia Z19?
La kulan Meizu E3, mobiil la socda astaamo loogu talagalay qayb ka mid ah dalabaadka dhexdhexaadka ah kaas oo shaashad 6-inji ah, awood leh sideed-xuddunta SoC, iyo xusuusta RAM ee deeqsi ah ay yihiin qaybaha inta badan la isticmaalo. Waan kuu balaarinay!
Google Pay for Wear OS ayaa si rasmi ah u timid Isbayn
Google Pay wuxuu la yimaadaa daawashada Wear OS ee Isbaanishka. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan daahfurka arjiga lacag bixinta oo sidoo kale saacadaha la gaaraya nidaamka hawlgalka Google.
Kuwani waa dhammaantood Android Wear smartwatches oo lagu cusbooneysiin doono Wear OS
Isbeddelka ka yimid Android Wear iyo Wear OS ee Google ayaa hadda rasmi ah. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan haddii smartwatch-kaaga la cusbooneysiin doono, ka dib waxaan ku tusi doonaa dhammaan moodooyinka la jaanqaadi kara.
Oukitel WP5000 tijaabada adkeysiga fiidiyowga
Waxaan kuu soo bandhigeynaa fiidiyoow kaas oo Oukitel WP5000 lagu soo rogay 14 tijaabooyin iska caabin ah oo kala duwan iyo halka ay ku muujineyso adkeysigeeda, iyo iska caabinta naxdinta iyo biyaha.
Hadiyadaha ugu qaalisan ee aabaha lasiiyo
Xulitaanka fikradaha hadiyadaha ugu fiican maalinta Aabbaha oo leh haddiyado tan ugu qaalisan uguna xiisaha badan in la siiyo Aabbaha.
Fitbit Versa: Nooca casriga ah ee smartwatch
Fitbit Versa: Qeexitaannada smartwatch-ka cusub ee jaban. Ka ogow wax badan oo ku saabsan saacadda cusub ee astaanta ee ku imaaneysa qiimo ka jaban moodooyinka badan ee suuqa yaal.
Vivo Apex, wuxuu gaari karaa suuqa rubuca saddexaad ee sanadka
Xanta ugu dambeysay waxay soo jeedineysaa in Vivo Apex uu dhab noqon doono oo uu joogsan doono inuu noqdo fikrad lagu soo bandhigay MWC hore.
Aasaasiga ah ee diiwaangashan 2017 kaamirada soo-baxa ee ka soo baxda xagga sare ee taleefanka, sida Vivo APEX
Kaamirada lagalaaban karo Vivo APEX waxaa diiwaangaliyay shirkadda 'Essential', 'Andy Rubin's company' sanadkii la soo dhaafay waxayna ka dhigi laheyd Telefoonka Muhiimka ah
Telefoonada casriga ah ee ruugga leh looma baahna inay noqdaan kuwo fool xun oo NOMU waxay ku caddaynaysaa M6-ga
Terminaalka cusub ee shirkadda NOMU ee iska caabinta naxdinta iyo biyaha ayaa ah NOMU 6, oo ah terminal meesha ka saaraya bilicsanaanta dhaqameed ee aaladda noocan ah.
Google Lens hadda wuxuu ku habboon yahay aalado badan
Barmaamijka xaqiiqda dhabta ah ee Google ayaa ka soo baxay beta wuxuuna waqti dhow la jaan qaadi doonaa tiro badan oo terminal ah.
Kaamirada Nest Cam IQ ayaa hadda la jaanqaadaysa Kaaliyaha Google
Kaamirada Google ee Nest ayaa bilowday inay hesho cusbooneysiin ka dhigaysa mid la jaanqaadi karta Kaaliyaha Google si aan ugu adeegsanno sidii inay ahayd Guri Google.
Mooshinka BlackBerry ayaa horeyba looga heli jiray Spain
Isku daygii shanaad ee BlackBerry uu ku doonayey inuu ku beddelo bartamaha dhexdiisa waxaa lagu magacaabaa BlackBerry Motion, aalad horeyba uga jirtay Spain
Android P wuxuu la jaan qaadayaa boosteejooyinka leh darajo
Nooca soo socda ee Android P ayaa ugu dambeyntiina bixin doona taageero loogu talagalay darajada u muuqata inay noqotay cunsur caan ka ah soo saarayaasha Android.
Qeexitaannada iyo sawirrada ZTE Axon 9
Calanka xiga ee ZTE, Axon 9, ma soo gali doono suuqa illaa bartamaha sanadka, laakiin sawirradii ugu horreeyay iyo astaamaheeda ayaa horeyba loo sii daayay.
Shirkadda Aagoo ee Leagoo waxay soo bandhigi doontaa Febraayo 26, Android-kii ugu horreeyay ee si cad u waxyooday iPhone X, oo leh shaashadda dusha sare ee shaashadda
Google Home wuxuu awood u leeyahay inuu macluumaad ku soo bandhigo TV-ga iyada oo loo marayo Chromecast
Google Home smart ku hadla wuxuu bilaabay inuu u oggolaado adeegsadayaasha inay muujiyaan natiijada weydiimahooda TV-ga ku xiran Chromecast.
Kodi 18 wuxuu la jaan qaadi doonaa Kaaliyaha Google
Nooca soo socda ee Kodi, oo hadda ku jira beta, wuxuu na siin doonaa iswaafajin kaaliyaha Google, Kaaliyaha Google
Fujitsu waxay iibisaa qaybteeda taleefanka gacanta
Shirkadda Jabbaan ee Fujitsu ayaa hadda ku dhawaaqday inay qaybteeda taleefanka gacanta ka iibisay shirkadda maalgashatada ee Polaris, halkaas oo shirkadda Japan ay saami ku leedahay, sidaas darteed waxay u muuqataa inay u eg tahay dhibic iyo qayb.
Google wuxuu hagaajiyaa dhibaatooyinka Chromecast ee ku xirnaanta Wifi
Ku dhowaad bil kadib dhibaatooyinkii ugu horreeyay ee Chromecast ee ku saabsan xiriirka Wi-Fi la shaaciyay, Google ayaa ugu dambeyntii heshay xalka, xalka lagu qaybinayo Adeegyada Google Play.
Ka faa'iideyso qiimo dhimista Valentine ee Banggood
Banggood: qiimo dhimista ilaa 90% ee Maalinta Jacaylka. Ka ogow waxbadan oo ku saabsan qiimo dhimista Maalinta Jacaylka ee dukaanka caanka ah.
Telefoonka Razer wuxuu hadda taageeraa waxyaabaha HDR ka kooban Netflix iyo Dolby 5.1
Waad ku mahadsan tahay tan ugu wanaagsan ee Razer Phone ay hirgelisay ka dib cusbooneysiinti ugu dambeysay, casriga ugu horreeya ee Razer wuxuu hadda taageeraa waxyaabaha HDR ee ka socda Netflix iyo Dolby 5.1
Vivo Xplay7 wuxuu yeelan doonaa 10 GB oo RAM ah iyo 4x optical zoom
Wax walba waxay umuuqdaan inay tilmaamayaan in taleefanka casriga ah ee ugu horeeya 10 GB oo RAM ah uu noqon doono Vivo Xplay7, oo ah terminaal kaas oo sidoo kale la socon doona 4x optical zoom